Fanafihana “cash point” tany Sambava : Ny ain’ilay jiolahy sisa tsy nalàn’ny fokonolona | NewsMada
Fanafihana “cash point” tany Sambava : Ny ain’ilay jiolahy sisa tsy nalàn’ny fokonolona
Tsy mandry fahalemana any Sambava, tsy mahagaga raha mirongotra ny fitsaram-bahoaka, raha vao omaly ny nisehoan’izany tany an-toerana. Lehilahy iray anisan’ny nanafika Cash point tratran’ny olona ary niharan’ny daroka…
Notafihina telo lahy nitondra Big boss ny Cash point mpivarotra fahana sy fandefasan’ny olona vola amin’ny alalan’ny finday iray tany Antaimby Sambava, ny alarobia hariva teo. Tamin’ny fotoana hanaovana ny kaonty mialoha ny hanidina ny trano tamin’ny 5ora hariva ireo olon-dratsy no niditra tao an-toerana. Voalaza fa mody hividy fahana ny iray voalohany. “Avy eo anefa nitifitra Big boss avy hatrany ary nandrahona ny olona tsy hisy hivoaka na hiantso vonjy. Tafaporitsaka ihany anefa ilay vehivavy iray tao an-tsena ka io ny niantso vonjy. Naheno an’io ny fokonolona ka nirohotra namonjy avy hatrany. Nitsoaka ireo jiolahy raha vao nahatazana izany. Tsy lasa lavitra akory, voasambotra ny iray ary niharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany. Ny roa kosa tafaporitsaka.
“Vola 925.000 Ar no lasan’izy ireo”, hoy ny tomponandraikitra. Ilay tovolahy tratra kosa nanamparan’ny olona ny fony. Ny ainy sisa tsy niala noho ny fisian’ny mpanelanelana mba hanolorana azy io ny mpitandro filaminana. Nilaza ilay tovolahy voasambotra niharan’ny fitsaram-bahoaka, fa avy any Nosy-Be izy ireo. Voalaza fa niteraka tahotra ho an’ny mponina ity tranga ity ka lasa nanidy trano avokoa aloha ny rehetra.
Amin’ny ankapobeny, tsy voafehy ny fitsaram-bahoaka, ary porofo ity tany Sambava ity. Tsy misy vahaolana avy amin’ny fanjakana, tsy voafehy ny olona manoloana izany. Mamono olona ny vahoaka, tsy mahalala lalàna intsony. Miraviravy tanana ny mpitondra ary tsy atokisan’ny olona intsony.